४५ वर्षदेखि थन्किएको थोत्रो कारको मूल्य ७ करोड ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»४५ वर्षदेखि थन्किएको थोत्रो कारको मूल्य ७ करोड !
४५ वर्षदेखि थन्किएको थोत्रो कारको मूल्य ७ करोड !
By रिता घिसिंग on २८ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०६:२३ रोचक खबर
अमेरिकाको फ्लोरिडामा ४५ वर्षदेखि थन्किएको थोत्रो कारको मूल्यले सबैलाई आश्चर्यचकित परेको छ । मानिसहरुले यो कारलाई कवाडी सम्झिरहेका थिए तर यसको लिलामीको चर्चाले मानिसहरुको होस उडाइदिएको छ । यसको न्युनतम मूल्य मात्रै ७ करोड २० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबर राखिएको छ ।
यसको मूल्य यति धेरै तोकिएपछि मानिसहरु यसको मूल्य किन बढी भयो ? भन्ने जान्न निकै उत्सुक भएका छन् । हालै एक अक्सन हाउसले यसलाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट खोजको दर्जा दिएको छ । यो कार पोर्शे कम्पनीले बनाएको थियो । १९७० मा बनेको यो कारलाई सेफ्टी ड्राइभिङका लागि प्रयोग गरिएको थियो । तर परीक्षणमा फेल भएपछि यो कार थन्किरहेको थियो ।
यो कार आफ्नो परीक्षणमा फेल भए पनि पोर्शे कम्पनीलाई भने निकै फाइदा भयो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार अहिले पोर्शेका कारलाई उत्कृष्ट बनाउन यो कारले ठूलो सहयोग गरेको थियो । यसको डिजाइनका कारण रेसिङ कारको नयाँ डिजाइनले जन्म लिएको थियो । कार प्रेमीहरुको लागि यो एउटा पुरानो कला हो यही कारण लिलामीमा यसको यति धेरै मूल्य राखिएको हो ।